Amụma Nzuzo - Goldenlaser
Ihe na-akpata Spacer
Golden Laser ga-asọpụrụ ma kpuchido nzuzo gị. Anyị ga-echebe ozi ọ bụla ị nyere mgbe ị gara na ebe nrụọrụ weebụ a.
01) Nchịkọta ozi
Na weebụsaịtị a, ị nwere ike ịnụ ụtọ ọrụ ọ bụla enyere, dị ka ịtụkwasị iwu, inweta enyemaka, ibudata faịlụ na mmemme ndị sonyere. Tupu ị gafee nke ahụ, achọrọ ka ị dejupụta ozi nkeonwe gị nke anyị ga-eji nye gị nhọrọ kwesịrị ekwesị ma nye gị ihe nrite ma ọ bụrụ na ọ bụla.
Anyị na-ebulite ọrụ anyị na ngwaahịa anyị (gụnyere ndebanye aha) iji gboo mkpa gị. Ọ bụrụ na enwere ike, anyị ga-achọ ozi ndị ọzọ gbasara ụlọ ọrụ gị, ahụmịhe na ngwaahịa anyị na ụzọ ịkpọtụrụ.
02) Ojiji eji
Ihe omuma gi nile na saiti a gha agha nchebe. Site Ama, anyị Golden Laser ga-imeli gị mma na ngwa ngwa ọrụ. Mgbe ụfọdụ, anyị nwere ike ịgwa gị ọhụrụ ahịa nnyocha na ngwaahịa Ama.
03) Njikwa Ozi
Anyị nwere ọrụ iwu iji kpuchido ozi ọ bụla anyị nakọtara n'aka gị, gụnyere nzaghachi ma ọ bụ ụzọ ndị ọzọ. Nke ahụ bụ ịsị ewezuga Golden Laser ọ nweghị ndị ọzọ ga-anụ ozi gị.
Site na ịchọta ozi gị sitere na weebụ yana ijikọ data sitere na ndị ọzọ, anyị ga-akwado gị ngwaahịa na ọrụ kachasị mma.
Mara: Njikọ ndị ọzọ na weebụsaịtị a, na - ejere gị ozi dị ka mma ma ga - ewepụ gị na weebụsaịtị a, nke pụtara na Golden Laser agaghị ewere ọrụ ọ bụla maka ọrụ gị na ozi na weebụsaịtị ndị ọzọ. Yabụ ndetu ọ bụla gbasara njikọ nke webs nke atọ ga-agafe na akwụkwọ nzuzo a.
04) Nchedo Ozi
Anyị emeela atụmatụ iji chebe ozi gị zuru oke, na-ezere ịla n'iyi, iji ya mee ihe n'ụzọ na-enweghị isi, nleba anya, ime ihe ike na ọgba aghara. All data na anyị na ihe nkesa na-echebe site firewall, na paswọọdụ.
Obi dị anyị ụtọ idezi ozi gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Mgbe mgbanwe, anyị ga-ezitere gị nri zuru ezu site na email maka ego gị.
05) Kuki eji
kuki bụ mpempe data nke emepụtara mgbe ị gara na weebụsaịtị anyị nke echekwara na ndekọ kuki nke kọmputa gị. Ha agaghị ebibi ma ọ bụ gụọ data na kọmputa gị. Kuki na-eburu paswọọdụ gị n'isi ma na-agagharị na ntanetị nke ga-eme ka sọọfụ gị gaa na weebụ anyị n'oge ọzọ. I nwekwara ike jụ kuki ma ọ bụrụ na ịchọghị.
06) Kwupụta Mgbanwe
nkọwa nke nkwupụta a na ojiji webụsaịtị nwe ya bụ Golden Laser. Ọ bụrụ na iwu nzuzo a gbanwere n'ụzọ ọ bụla, anyị ga-edebe nsụgharị emelitere na ibe a ma rịọkwa ụbọchị na ụkwụ nke ibe a. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị ga-etinye akara ngosi na weebụ iji gwa gị.
Esemokwu ọ bụla kpatara nkwupụta a ma ọ bụ ojiji weebụsaịtị ga-erube isi n'iwu kwekọrọ na nke Ndị Republic of China.
CO2 Lasers Nyocha